Toriteny sy hafatra napetrany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Kardinaly Tsarahazana Mgr Désiré
Toriteny sy hafatra napetrany
Maro ireo fotoana nandraisan’ny Kardinaly Tsarahazana fitenana tany Toamasina. Teo ohatra ny fandrasainy fitenenana nandritra ny fitokanana ny pylône an’ny Radio Masôva. Teo koa ny toriteny izay fampianarana fanaon’ny fiangonana nandritra ny lamesa ary ny farany singanina dia ny teny fisaorana nataony. Tatitra.
“Isan’ny Nanaitra ahy tamin’ny fandraisana ahy dia tsapa fa miandrandra zavatra lehibe ny Kristianina ary koa ny vahoaka Malagasy. Miandrandra fahagagana ve ? Mampiasa saina ahy izany. Mampiasa saina ahy koa ny mahatsiaro ireo miezaka hitory ny Vaovao Mahafaly any lavitra any, ireo pretra any lavitra any. Izany indrindra no nanaovana ezaka hanome tanjaka an’ity radio ity. Radio izay manao lohalaharana ny fanabezana ialana amin’ny fanambakana. Mety hanelingelina izy ity fa hirosoana hatrany. ” tahaka izay raha fintinina ny teny natsipin’ny Kardinaly nandritra ny fotoana fitsofan-drano ilay pylône an’ny Radio Masôva.
Rehefa irahina isika rehetra vita Batemy ary koa nandray ny sakiramentan’ny Fankaherezana dia matetika milaza fa “tsy vitako izao”, “tsy mahay miteny aho”, “tsy voaofana amin’izany aho”. Jereo anefa fa raha vakiantsika ny Evanjely dia hitantsika fa ireo Apositoly ireo dia tsy nivoaka tamin’ny sekoly avo lenta, ary saika mpanarato ny ankamaroany. Jesoa Kristy izany dia nampanao batemy an’izao tontolo izao tamin’ny alalan’ireo mahantra, tamin’ny alalan’ireo madinika. Noho izany isika rehetra no voantso araka ny Evanjely araka ny fanomezam-pahasoavana azontsika tsirairay avy. Mazava loatra dia tsy maintsy atao amin’ny alalan’ny fitenenana.
Eny ilaina dia ilaina ny toriteny, nefa tsy mijanona amin’izany ihany fa indrindra koa amin’ny alalan’ny oha-piainana manaraka ny fiteny hoe “ny teny manaitra fa ny atao ihany no mahasarika” Raha tsy mifanaraka amin’ny tenenintsika ny ataontsika dia lasa mpandainga isika. Matetika mahavoa antsika izany. Hafa ny lazain’ny vava, hafa ny zavatra atao ka miaina ao anatin’ny fihatsaram-belatsihy isika. Noho izany, mila mibebaka isika, mila mibebaka isika mianakavy. Tsy maintsy mibebaka aloha mba hahatanteraka ny asa. Alohan’ny hanaovana fitoriana…. Minoa ny Evanjely (Mk 1, 17-25).
Raha tsy mibebaka isika dia tsy afaka ny hiantoka ny Marina, ary misy ny hira kristianina manao hoe : “Tsy zakan’ny olombelona vesaran’ota ny marina”
Rentsika teo ny nanjo ny mpaminany Amosa, tany Betela any amin’ny faritanin’i Joda : Ry mpahita ô, mandehana mandositra any amin'ny tanin'i Jodà, ka any hianao no mihinàna hanina; any hianao no maminania. Fa aza maminany atý Betela intsony, satria fitoera-masin'ny mpanjaka ny atý, ary tranom-panjakana ao amin’ny vakiteny voalohany (Bokin'i Amosy 7,12-15.)
Tsotra ny antony. Manelingelina ny mpisorona ny mpaninany Amosa. Tsy manaiky ny tsy rariny izy, manohitra ny fanambakana ny madinika izy, mitaky ny rariny sy ny hitsiny izy. Mazava loatra araka ny efa voalazako teny am-boalohany tsy zakanin’ny olombelona tsy vonona hibebaka ny marina : dia ny famporetana, fampijaliana, fampitahorana, fampisamborana ary famonoana aza.
Rentsika teo ny valitenin’i Amosa : Tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany; fa mpiandry omby sy mpamboly aviavy. Ary nalain'ny Tompo tany aho, dia nataon'ny Tompo tamiko hoe: Mandehana hianao, maminany any amin'Israely vahoakako.
Ry havako malala
Ilaina dia ilaina ny fijoroana ho vavolombelona tahaka an’i Amosa mpaminany. Mahazo laka maneran-tany ny ratsy, ny fitiavan-tena, fitiavana harena diso tafaohatra, fitiavana voninahitra… ka zary tsy mampaninona ny fampiasana ny hafetsen-dratsy rehetra mba hahazoana ny tombontsoa manokana, tsy mampaninona ohatra ny fampiasaina ny herisetra. Mila miova toe-tsaina isika izany. Mila miova isika Malagasy. Sao dia lasa fomba fanao ny risoriso, satria tokoa mantsy, ny zavatra hita amin’izao raha misy zavatra karakaraina, raha mikarakara taratatsy na zavatra iray ka tsy mety vita ka asaina miverimberina dia noho ianao tsy mahalala fomba, tsy manolotra kely. Ny Papa Fransoa dia tsy mihambahamba miteny mafy ary manohitra an’izay rehetra mamoritra ny mpiara-belona. Tsy afaka ampandeferina ny zava-misy ka rehefa tsara dia tsara, rehefa tsy mety dia tsy mety. Tsy mahatanty mijery ny vahoaka mijaly noho ny tsy fahamarinana, noho ny tsy firaharahiana Andriamanitra
Nahatsapa ny fahasoavana nomen’Andriamanitra azy i Md Paoly. Misaotra an’Andriamanitra izy araka ny ao amin’ny vakiteny faharoa rentsika teo. Isika koa dia tokony hahatsapa izany ary hisaotra an’Andriamanitra.
Ny hafatra ampitaina amintsika mianakavy dia ity : Mila mijoro sy miaina marina ny maha kristianina antsika isika. Koa raha tiantsika marina i Jesoa Kristy dia hiova isika ary azo inoana sy tsy isalasalana fa handroso ity Madagasikara ity.
Tadidintsika ny fanontaniana telo napetraka tamin’i Md Piera : Piera ! moa tia va ianao ? Ary tsaroantsika ny valintenin’i Md Piera nanao hoe: Eny tiako ianao Jesoa… Raha ny anton’ny fanontaniana no dinihana dia olona mitady zavatra ho azy no mametraka fanontaniana toa izany. Raha tia ahy ianao dia ataovy toa izao aho, ohatra, raha tia ahy ianao vangao lamasinina, vangao lambahoany, vangao telefaonina, raha tia ahy ianao hanamboary trano vato.
Tsy manao toa izany anefa i Jesoa fa maniraka izy. Tia ahy va ianao ? Fahano ny zanak’ondry. Izany hoe fahavononana, fitiavana hanompo ny namana no takian’i Jesoa Kristy. Izany no nahatonga Azy niteny hoe : Aza mitondra na inona na inona eny an-dalana na kitapo, na mofo, na farantsa kely varahina amin'ny fehin-kibo, afa-tsy tehina ihany, fa ny tongotra no asiana kapa, ary tsy mitondra akanjo roa.
Isika hitondra vahoaka na ara-panahy na ara-batana tiavontsika marina i Kristy raha tsy manompo ny vahoaka, mamono tena ho an’ny vahoaka izay vao tena tia an’i Kristy marina. Tadidio mandrakariva ny fahendren-drazana hoe : “aza ny lohasaha mangina no jerena fa Atra antampon’ny loha”
Fisaorana maro lafy ho an’ny sokajin’olona isanisany, ny Kristianina ny olona tsara sitra-po, tamin’ny fikarakarana amin’ny lafin-javatra maro ka teo ny fanotronana hatrany Roma ka hatreto Toamasina. Nahafoy fotoana, nahafoy vola aman-karena tsy ho voavaliko mandrakizay ireny fa Andriamanitra sy ny fitahiany no hangatahako hirotsaka aminareo tsirairay avy. Ny fanomezako ho anareo rehetra ho setrin’izany dia ny Romana 12, 21. (Tsy notononiny ny voarakitra ao fa heveriny fa efa mahay azy io ny rehetra satria io ny teny fanevany : “Aza mety ho resin'ny ratsy, fa reseo amin'ny soa ny ratsy”).
Ahitana ny toriteny